Mai Chibwe VekwaZimuto: Ndadzoka
Gore rino ndambofamba munyika dzakati wandei asi ndadzoka kuno kuUK. Website ndadzosera. kwange kwapera mwedzi yakawanda isipo. Tosangana ikoko totaurirana nyaya dzemumba tichikurudzirana kurarama nomufaro.
Ukatarisa kurambana kunoita vanhu muno mu UK unobva watoona kuti shuwa nyika yoda kuguma. Isu dai tamborega kungotevedzera izvozvo, tambotaridza kuti muupenyu tinokwanisa kuratidza vamwe maitigwe azvimwewo zvine chiremera.
Posted by Mai E Chibwe at 06:18